သကျရောကျတှကျနညျး တဈနှဈကို တဈခါ မိမိကိုယျတိုငျ ဗဒေငျတှကျကွညျ့ဖို့ နညျးလေးပါ – Focus Myanmar
သကျရောကျတှကျနညျး တဈနှဈကို တဈခါ မိမိကိုယျတိုငျ ဗဒေငျတှကျကွညျ့ဖို့ နညျးလေးပါ
တှကျနညျး မိမိရောကျဆဲ အသကျကိုတညျ ၈ နဲ့စားပါ။ အကွှငျးကိုယူ၍ လကျယာရဈပါ။ ဥပမာ ၂၅ နှဈပွညျ့ပွီး နောကျတဈရကျဆိုရငျ ၂၆ ယူရပါမညျ။
ဥပမာ။ ။ အသကျ ၂၆ နှဈ တနင်ျလာသား
တနင်ျလာသား ၂ ကွှငျးဖွဈ၍ တနင်ျလာသကျရောကျမှ စ၍ ၂ ကှကျမွောကျကို ကွညျ့လြှငျ အင်ျဂါသကျရောကျ ကသြောကွောငျ့ အဂါင်ျသကျရောကျအဟောကိုဖတျပါ။
အခဈြရေး မတ်ေတာရေး စနျးပှငျ့ခွငျး အမှအေနှဈ ဥစ်စာမြားရတတျခွငျး မောငျကောကျရ သူဌေးကြျောကိနျးဖွဈလို့ စီးပှားဥစ်စာ ရတနာတိုးတတျ၍ အလုပျအကိုငျအဆငျပွေ မွယောအမှအေနှဈရတတျပါမညျ။ အထကျလူကွီးမြား၏ ခြီးမွှငျ့မွှောကျစားမူခံရတတျပါမညျ။ ကဆုနျ ဝါခေါငျ တနျဆောငျမုနျးလမြားတှငျ ကွာသပတေး တနင်ျလာနသေ့ားမြားကွောငျ့ အလုပျစီးပှား တိုးတတျအဆငျပွနေိုငျပါမညျ။ အိမျထောငျကတြတျမညျ။ ယောင်ျကြားလေးဆိုလြှငျ မိနျးကလေးနှငျ့ အခဈြနယျလှနျတတျပွီး မယူမဖွဈယူရတတျမညျ။ မယူခဲ့သျောငှလြေျောရကိနျး ကွုံတတျပါသညျ။
အခဈြရေး အိမျထောငျရေး မတညျငွိမျ ဗြာမြားရတဲ့ အခြိနျဖွဈမညျ။ အဆငျမပွေ ပဋိပက်ခမြား ကွုံတှေ့ ရတတျမညျ။ လူမူရေးပွသနာမြား ငှအေတှကျ ခဈြသူခွငျးအဆငျမပွမေူ့ အိမျထောငျဘကျ၏ ရနျလိုမူ သူတပါးနှငျ့ခိုကျရနျပွသနာ ကွုံတှရေ့ခွငျးမြား မတျောတဆသှေးထှကျသံယိုဖွဈခွငျး အခြုပျအနှောငျသငျ့တတျခွငျး လကျအောကျငယျသား တျောလှနျခွငျး မိနျးကလေးအတှကျနှငျ့ ပွသနာမြားဖွရှေငျးရခွငျး စကျပစ်စညျး ထှကျတတျ ပကျြတတျခွငျး ရနျငွိုးရနျစရှာတတျခွငျးမြား ကွုံတှတေ့တျပါမညျ။ ခရီးတဈဆဈခြိုး သှားရတတျပါမညျ။
အခဈြရေးစနျးပှငျွ့ပီး အိမျထောငျကတြတျမညျ။ အိုးသဈအိမျသဈ နရောသဈ ရှပွေ့ောငျးရခွငျးမြား ရာထူး အလုပျအကိုငျ အဆငျပွတေိုးတတျ ငှကွေေးရှာဖှလေို့ ကောငျးခြိနျဖွဈမညျ။ အခဈြရေးတှငျ အပွိုငျအဆိုငျမြားပျေါပေါကျတတျပွီး ခဈြမူရေးရာကိစ်စမြား ဖွရှေငျးရတတျပါမညျ။ အခဈြအတှကျနဲ့ စကားမြား ရနျမြား မနာလိုရနျငွိုးဖှဲ့ခွငျး ခံရတတျပါသညျ။ အရှတေ့ောငျအရပျက လာဘျလာဘမြား ဝငျလာတတျပါသညျ။ လူလှတျဖွဈလြှငျ အိမျထောငျကတြတျပါမညျ။ စိတျခမျြးသာရသောခရီး ဘုရားဖူးခရီးသှားရတတျပါမညျ။ ကြောကျနီ ပတ်တမွား ရတနာ ရှငှေေ ရရှိစမေဲ့နှဈဖွဈသညျ။ ဒီနှဈထဲတှငျ ရသလောကျ ပွနျထှကျတတျ မမွဲတတျ၍ သတိရှိဖို့ လိုပါမညျ။
ဇနက်ကမငျးသား ကုနျတငျလှပေကျြ၍ သမုဒ်ဒရာရပွေငျ ပငျပနျးကွီးစှာ ကူးခပျခဲ့ရတဲ့ ကိနျးလို့ဆိုပါတယျ။ အရောငျးအဝယျ အမွတျအစှနျးမရှိဘဲ ဆုံးရှုံးတတျခွငျး မီး ခိုးသူ ပကျြစီးခွငျး အိမျထောငျရေး အဆငျအပွမေူမြား မိနျးမအတှကျနှငျ့ လူမူရေးပွသနာမြား ဖွရှေငျးရခွငျး လုပျငနျးနှငျ့ပတျသပျ၍ တရားရငျဆိုငျရခွငျး အခြုပျအနှောငျကတြတျခွငျး မတျောတဆ သှေးထှကျသံယိုထိခိုကျမိတတျခွငျး ခြေးငှားထားသောငှကွေေး ပွနျမရနိုငျခွငျးမြား အိမျထောငျရေး အခဈြရေးတှငျလဲ အနှောကျအယှကျ အဖကျြအစီးမြား ကွုံတှနေို့ငျသောနှဈဖွဈ၍ သတိထားသငျ့ပါသညျ။
တပေါငျး တနျခူး ကဆုနျလတှငျ ငှကွေေးလာဘျရှငျစပေါမညျ။ အလုပျအကိုငျမြား မဆငျပွစေီးပှားရေးတိုးတတျ အကြိုးခံစားခှငျ့မြား ရရှိနိုငျမညျ့နှဈဖွဈသညျ။ လူပြိုအပြိုဖွဈလြှငျ အခဈြရေးစနျးပှငျ့တဲ့နှဈဖွဈပွီး အနောကျအရပျကခဈြသူတှတေ့တျပါမညျ။ အခဈြရေးအဆငျပွေ အိမျထောငျရေးအဆငျပွတေဲ့နှဈဖွဈမညျ။ တဈခုသတိထားရမှာက အခဈြကိုမယုံလှယျပါနှငျ့။ သူတဈပါးကွောငျ့ သားသမီးကွောငျ့ မကျြနှာပကျြ အရှကျရတတျခွငျး စှပျစှဲပွောဆိုခံရခွငျးမြား ခံရတတျပါသညျ။ ကှဲကှာခဲ့သော အိမျထောငျဘကျ ခဈြသူနှငျ့ ပွနျလညျအဆငျပွပေေါငျးဖကျရတတျပါသညျ။
စီးပှားရေးကဆြငျး အလုပျအကိုငျမြား အဆငျမပွေ ငှကွေေးဆုံးရှုံး နဈနာတတျပါသညျ။ ဘာဘဲလုပျလုပျ အဆငျမပွနေိုငျ အဝငျမရှိဘဲ အထှကျသာမြားနတေတျပါမညျ။ ဥစ်စာပစ်စညျးမြား ကပြောကျခွငျး အခိုးခံရခွငျး အပွိငျအဆိုငျအတိုကျအခံမြားပေါခွငျး ကနျြးမာရေးညံ့ခွငျး လနော ရငျနာ ဝမျးနာ မတျောတဆထိခိုကျနာ မကျြစိရောဂါ လဖွေတျခွငျး အသကျအန်တရာယျ စိုးရိမျရခွငျးမြား ကွုံတှတေ့တျပါသညျ။ လူမြိုးကှဲမြားနှငျ့ ပွသနာခိုကျရနျကွုံခွငျး လူမြိုးကှဲကွောငျ့ဘဲ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးမြား တိုးတတျအဆငျပွစေပေါမညျ။ အိမျထောငျရေး မတညျငွိမျနိုငျ လငျမယားခွငျး ကှာရှငျးလမျးခှဲရတတျပါသညျ။ အထကျလူကွီး ငွိုငငျအထငျလှဲ မိတျဆှကေောငျးမြား ပကျြစီး မိနျးမကွောငျ့ ရနျငွိုးထား အန်တရာယျပေးနိုငျပါသညျ။ အနအေထိုငျ အသှားအလာဆငျခွငျရမညျ့နှဈဖွဈသညျ။
အခဈြရေး စနျးပှငျ့သော နှဈဖွဈ၍ အိမျထောငျကတြတျပါမညျ။ ရှောငျလှဲ၍မရအောငျ အိမျထောငျကကြိနျးပါ။ အလုပျအကိုငျရာထူးတိုးမွှငျ့ခံရခွငျး အိုးသဈအိမျသဈ နရောသဈသို့ရှပွေ့ောငျးရခွငျး မငျးစိုးရာဇာမြားမှ ခြီးမွှငျ့မွှောကျစားခံရခွငျး ရပျရှာအုပျခြုပျလူကွီးဖွဈရခွငျး ရပျရေးရှာရေး နိုငျငံရေးနှငျ့ ဌာနဆိုငျရာမြားတှငျ ဦးစီးဦးဆောငျပွုလုပျရခွငျး အကွီးအကဲဖွဈရတတျခွငျး အလုပျအကိုငျစီးပှားတိုးတတျ ရတနာရှငှေလောဘျလာဘကောငျးမြား တိုးပှားစခွေငျး မင်ျဂလာရှိသောအမူကိစ်စမြား ဆောငျရှကျပေးရခွငျးမြား ဆနျရေ စပါး ရှငှေပွေညျ့စုံစှာ ရမညျ့နှဈဖွဈပါသညျ။ ရဟနျးဖွဈလြှငျလဲ ကြောငျးဆောငျ အလှူရှငျပျေါလာပါမညျ။
တပို့တှဲ တပေါငျးလမြားတှငျ ငှကွေေးအတှကျ စကားမြား ရနျဖွဈရခွငျး မိခငျ ဖခငျကနျြးမာရေးညံ့တတျခွငျး ဆှမြေိုးသားခငျြးမြားကွောငျ့ စိတျသောက အပူသငျ့တတျခွငျး တနျခူး ကဆုနျ ပွာသိုလမှာ သားသမီး ဆှမြေိုးလကျအောကျငယျသားမြားကွောငျ့ အမူအခငျးပွသနာမြားဖွရှေငျးရတတျမညျ။ အိုး အိမျနရော အလုပျရှပွေ့ောငျးရတတျသညျ။ သူခိုးအခိုးခံရခွငျး မီးအန်တရာယျပေးခွငျး ခဈြသူတှလြေှ့ငျလဲ မလှတျလပျသောခဈြသူမြိုးနှငျ့ ကွုံတှတေ့တျပါမညျ။ တကယျလို့ ကွာသပတေးသားသမီးက တနင်ျဂနှေ သကျရောကျကတြယျ ဆိုရငျတော့ ယာဉျကား စကျပစ်စညျး ဝငျနိုငျပါသညျ။
မိမိနာမညျ မှေးသက်ကရာဇျအလိုကျ အဟောထပျမံကှဲပွားနိုငျပါသညျ။
သကျရောကျတဈခုထဲက အဓိကမကပြမေဲ့ ပါပဂွိုလျစားပွီး၊ ညံ့တဲ့သကျရောကျကနြရေငျ ဘာဘဲလုပျလုပျ သတိလေးထားလုပျပါ။
ဥပမာ ။ ။ အဂါင်ျဂွိုလျစား အဂါင်ျသကျရောကျ၊ စနဂွေိုလျစား စနသေကျရောကျ၊ ရာဟုဂွိုလျစား ရာဟုသကျရောကျ၊ တနင်ျဂနှဂွေိုလျစား တနင်ျဂနှသေကျရောကျတှဟော ဘုမ်မိကတြဲ့နှဈတှဖွေဈလို့ အဲဒီနှဈတှမှော အထူးသတိထားပွီး ငှခြေေးခွငျး၊ လုပျငနျးသဈတိုးခြဲ့ခွငျး၊ရောငျးဝယျခွငျး၊ အိမျထောငျပွုခွငျးတှေ တတျနိုငျသမြှရှောငျပါ။
ငှလေူလိမျခံရခွငျး၊ငှလြေျောရခွငျးမြိုးတှေ ကွုံတှနေို့ငျတာကွောငျ့ တတျနိုငျသမြှ ငွိမျငွိမျနပေါ။ မိတျရငျးဆှရေငျး ယုံကွညျရတဲ့သူကို ငှခြေေးပေးရငျတောငျမှ အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ ပွနျရဖို့ ခကျခဲတတျပါတယျ။ ခါတိုငျးထကျပိုပွီး ကုသိုလျကောငျးမူပွုပေးပါ။
ဂွိုလျစားတှကျနညျးကိုတော့ အခှငျ့သာလြှငျ တငျပေးပါ့မယျရှငျ….
ယတွာမေးထားသူမြား အတှကျ ဆရာကွီး မငျးသိင်ျခ၏ သကျရောကျယတွာခနြေညျးကို ပွနျမြှဝပေါသညျ။
တနင်ျဂနှသေကျရောကျ ။ ။ သဈသီး ( ၆ ) မြိုး၊ ရှောကျသီးသုပျ၊ယပျ ( ၄ ) လကျ ၊ သောကျတျောရေ ( ၆ ) ခှကျ မိမိအိမျဘုရားမှာ လှူပါ။
မိမိအိမျတှငျရှိနသေော မွအေိုးအပဲ့၊ပနျးအိုးအပဲ့ ၊မီးခြောငျးအပကျြမြား ရှာဖှစှေနျ့ပဈပါ။ ဘဲဥ ပွုတျ ခှေးလေးတှအေား ကြှေးပါ။
တနင်ျလာသကျရောကျ။ ။ မိမိအိမျဘုရားတှငျ ကံကျော ( ၂ ) ညှနျ့၊ နှငျးဆီ ( ၇ ) ပှငျ့ နှငျ့ နနျးကွီးသုပျ ၊နံကထိုငျ ၊နှားနို့ နှငျ့ ကိတျမုနျ့ လှူပေးပါ။
မိမိအိမျတှငျရှိသော လှယျအိတျအဟောငျး၊ အရကျပုလငျးခှံမြားရှိလြှငျ ရှာဖှစှေနျ့ပါ။
အာလူးနဲ့ ဝကျသားခကျြ၍ အရူးကို ထမငျးကွှေးပါ။
အဂါင်ျသကျရောကျ။ ။ မိမိအိမျဘုရားတှငျ ရှကျလှ ( ၇ ) ညှနျ့၊ ရှထေီး ( ၄ ) လကျ၊ရတေျောသကျစေ့၊ဆှမျးသကျစေ့၊ဆီမီးသကျစေ့ လှူဒါနျးပူဇျောရပါမညျ။
မိမိအိမျတှငျ နာရီဟောငျး၊စကျပစ်စညျးဟောငျးတှရှေိနလြှေငျ ရှာဖှစှေနျ့ပဈရပါမညျ။
ဗုဒ်ဓဟူးသကျရောကျ။ ။ မိမိအိမျဘုရားတှငျ ပိတောကျ ( ၇ ) ညှနျ့၊ ဒံပေါကျ၊ထောပတျထမငျး ၊ပေါငျမုနျ့ထောပတျသုပျ လှူပေးပါ။
သခှါးသီးမှာ သှားကွားထိုးတံ ၂၆ ခြောငျးစိုကျ၍ ရတှေငျမြှောပေးပါ။
စနသေကျရောကျ။ ။ မိမိအိမျဘုရားတှငျ အုနျးသီး၊ အုနျး ( ၁ ) ညှနျ့ သပွေ ( ၆ ) ညှနျ့၊အုနျးသီးပါသော မုနျ့ ( ၆ )ခု လှူပါ။
စနနေေ့ ညနစေောငျးမှာ လုံခညျြအဟောငျးတဈထညျ ရနေံဆီလောငျးပွီး မီးရှို့လိုကျပါ။
ကွာသပတေး သကျရောကျ။ ။ မိမိအိမျဘုရားတှငျ အုနျးနို့ခေါကျဆှဲ၊ အုနျးသီးစိတျ၊သွဇာ ( ၃ ) ညှနျ့၊ အုနျး ( ၆ ) ညှနျ့၊ အုနျးစိမျး ဆားသိပျ လှူပေးပါ။
ကွာသပတေးနေ့ ညနမှော ပဲကွျော ခှေးလေးတှအေားကွှေးပါ။တနင်ျလာနေ့ ညနတှေငျ ငါးလှတျပေးပါ။
ရာဟု သကျရောကျ။ ။ မိမိအိမျဘုရားမှာခရေ ( ၆ ) ညှနျ့၊ကျောရညျ ခေါကျဆှဲ၊ ခေါငျးလောငျး၊ ကွကျလြှာ ( ၆ ) လကျ လှူပါ။
သောကွာနေ့ ညနမှော ဆိတျသားဟငျးနဲ့ ထမငျးကွမျးနယျပွီး ခှေးလေးတှအေားကြှေးပါ။ လမျးဆုံမှာ သဲခငျးပေးပါ။
သောကွာသကျရောကျ။ ။ မိမိအိမျဘုရားမှာ ဇီးပွား၊ပေါကျစီ၊ စံပါယျပနျး၊ ဆီထမငျး လှူပေးပါ။
စနနေေ့ ညနမှော ထနျးလြှကျ ( ၁၁ ) ခဲ စက်ကူကနျတော့နှငျ့ ထုပျ၍ ခှေးလေးတှကေိုပဈ ပေါကျကွှေးလိုကျပါ။
တကယျလို့ နိုငျငံရပျခွားနှငျ့ ကိုယျ့မွို့ကိုယျ့ရှာမဟုတျဘဲ တခွားမွို့ရောကျနလေို့ စသညျဖွငျ့ ယတွာလုပျဖို့ အခကျအခဲ ရှိခဲ့ရငျ မလုပျဖွဈရငျလဲ စိတျခုနစေရာမလိုပါဘူး။ မိမိစိတျကိုအမွဲကွညျလငျအောငျထိနျးပွီး မိမိလကျလမျးမှီသမြှ မိမိတတျနိုငျသမြှလေး ကုသိုလျလေးတှေ လုပျပေးရငျလဲ အဆငျပွပေါတယျ။
ဥပမာ။ ။ သှားရငျးလာရငျးနဲ့ လမျးမပျေါရောကျလာတဲ့ အကောငျငယျလေးတှကေို သူမြားတတျနငျးမိမှာ ဆိုးလို့ လမျးဘေးပွနျခပြေးခွငျး၊ယာဉျသှားလမျးပျေါရောကျနတေဲ့ ခဲတှေ တှခေဲ့ရငျ ဖယျပေးခွငျး၊မိမိရပျကှကျ ဒါမှမဟုတျ မိမိလမျးထဲမှာ ခြိုငျ့ခှကျတှရှေိနရေငျ တဈခုခုနဲ့ ညီညာအောငျ လုပျပေးခွငျး၊ရအေိုးစငျလှူခွငျး၊ရတှေငျးရကေနျ လမျးတံတား အလှူခံဌာနတှမှော တတျနိုငျသလောကျ ပါဝငျလှူဒါနျးခွငျး၊ ရပျကှကျထဲမှာရှိတဲ့ လမျးပျေါက ခှေးလေးတှကေို အစာကြှေးခွငျး၊ ခိုစာကြှေးခွငျး၊ ငှကျကလေးမြားလှတျပေးခွငျး၊ ငါးလှတျပေးခွငျး၊ ငါးစာကြှေးခွငျး၊
ဘုနျးကွီးကြောငျးတို့ ဘုရားတို့ ရောကျရငျလဲ တံမကျြစညျးလှဲ ရအေိမျသနျ့ရှငျးပေးခွငျး၊ သကျကွီးရှယျအိုမြားကို ကူညီဖေးမပေးခွငျး၊ မွို့ကွီးတှမှောဆိုရငျလဲ ကားစီးတာကအစ မိမိထကျကွီးသူကို နရောပေးခွငျး၊ပွညျ့တဲ့အိုးကို ထပျမဖွညျ့ဘဲ အမှနျတကယျ လိုအပျနတေဲ့နရောကိုရှေးခယျြပွီး အလှူဒါန ပွုပေးခွငျး စသညျ စသညျဖွငျ့ ခါတိုငျးထကျပိုပွီး လုပျပေးမယျဆိုရငျ အစစအရာရာ အတှကျ ယတွာလုပျပွီးသလိုပါဘဲ ….
အစစအရာရာ အဆငျပွခြေောမှေ့၍ ကိုယျစိတျနှလုံး အေးငွိမျးကွပါစေ…
ဒျေါမွမွနှယျ ( ဗဒေငျ လက်ခဏာ )
သက်ရောက်တွက်နည်း တစ်နှစ်ကို တစ်ခါ မိမိကိုယ်တိုင် ဗေဒင်တွက်ကြည့်ဖို့ နည်းလေးပါ
တွက်နည်း မိမိရောက်ဆဲ အသက်ကိုတည် ၈ နဲ့စားပါ။ အကြွင်းကိုယူ၍ လက်ယာရစ်ပါ။ ဥပမာ ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီး နောက်တစ်ရက်ဆိုရင် ၂၆ ယူရပါမည်။
ဥပမာ။ ။ အသက် ၂၆ နှစ် တနင်္လာသား
တနင်္လာသား ၂ ကြွင်းဖြစ်၍ တနင်္လာသက်ရောက်မှ စ၍ ၂ ကွက်မြောက်ကို ကြည့်လျှင် အင်္ဂါသက်ရောက် ကျသောကြောင့် အဂါင်္သက်ရောက်အဟောကိုဖတ်ပါ။
အချစ်ရေး မေတ္တာရေး စန်းပွင့်ခြင်း အမွေအနှစ် ဥစ္စာများရတတ်ခြင်း မောင်ကောက်ရ သူဌေးကျော်ကိန်းဖြစ်လို့ စီးပွားဥစ္စာ ရတနာတိုးတတ်၍ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေ မြေယာအမွေအနှစ်ရတတ်ပါမည်။ အထက်လူကြီးများ၏ ချီးမြှင့်မြှောက်စားမူခံရတတ်ပါမည်။ ကဆုန် ဝါခေါင် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ကြာသပတေး တနင်္လာနေ့သားများကြောင့် အလုပ်စီးပွား တိုးတတ်အဆင်ပြေနိုင်ပါမည်။ အိမ်ထောင်ကျတတ်မည်။ ယောင်္ကျားလေးဆိုလျှင် မိန်းကလေးနှင့် အချစ်နယ်လွန်တတ်ပြီး မယူမဖြစ်ယူရတတ်မည်။ မယူခဲ့သော်ငွေလျော်ရကိန်း ကြုံတတ်ပါသည်။
အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး မတည်ငြိမ် ဗျာများရတဲ့ အချိန်ဖြစ်မည်။ အဆင်မပြေ ပဋိပက္ခများ ကြုံတွေ့ ရတတ်မည်။ လူမူရေးပြသနာများ ငွေအတွက် ချစ်သူခြင်းအဆင်မပြေမူ့ အိမ်ထောင်ဘက်၏ ရန်လိုမူ သူတပါးနှင့်ခိုက်ရန်ပြသနာ ကြုံတွေ့ရခြင်းများ မတော်တဆသွေးထွက်သံယိုဖြစ်ခြင်း အချုပ်အနှောင်သင့်တတ်ခြင်း လက်အောက်ငယ်သား တော်လှန်ခြင်း မိန်းကလေးအတွက်နှင့် ပြသနာများဖြေရှင်းရခြင်း စက်ပစ္စည်း ထွက်တတ် ပျက်တတ်ခြင်း ရန်ငြိုးရန်စရှာတတ်ခြင်းများ ကြုံတွေ့တတ်ပါမည်။ ခရီးတစ်ဆစ်ချိုး သွားရတတ်ပါမည်။
အချစ်ရေးစန်းပွင့်ြ့ပီး အိမ်ထောင်ကျတတ်မည်။ အိုးသစ်အိမ်သစ် နေရာသစ် ရွှေ့ပြောင်းရခြင်းများ ရာထူး အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေတိုးတတ် ငွေကြေးရှာဖွေလို့ ကောင်းချိန်ဖြစ်မည်။ အချစ်ရေးတွင် အပြိုင်အဆိုင်များပေါ်ပေါက်တတ်ပြီး ချစ်မူရေးရာကိစ္စများ ဖြေရှင်းရတတ်ပါမည်။ အချစ်အတွက်နဲ့ စကားများ ရန်များ မနာလိုရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း ခံရတတ်ပါသည်။ အရှေ့တောင်အရပ်က လာဘ်လာဘများ ဝင်လာတတ်ပါသည်။ လူလွတ်ဖြစ်လျှင် အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါမည်။ စိတ်ချမ်းသာရသောခရီး ဘုရားဖူးခရီးသွားရတတ်ပါမည်။ ကျောက်နီ ပတ္တမြား ရတနာ ရွှေငွေ ရရှိစေမဲ့နှစ်ဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်ထဲတွင် ရသလောက် ပြန်ထွက်တတ် မမြဲတတ်၍ သတိရှိဖို့ လိုပါမည်။
ဇနက္ကမင်းသား ကုန်တင်လှေပျက်၍ သမုဒ္ဒရာရေပြင် ပင်ပန်းကြီးစွာ ကူးခပ်ခဲ့ရတဲ့ ကိန်းလို့ဆိုပါတယ်။ အရောင်းအဝယ် အမြတ်အစွန်းမရှိဘဲ ဆုံးရှုံးတတ်ခြင်း မီး ခိုးသူ ပျက်စီးခြင်း အိမ်ထောင်ရေး အဆင်အပြေမူများ မိန်းမအတွက်နှင့် လူမူရေးပြသနာများ ဖြေရှင်းရခြင်း လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သပ်၍ တရားရင်ဆိုင်ရခြင်း အချုပ်အနှောင်ကျတတ်ခြင်း မတော်တဆ သွေးထွက်သံယိုထိခိုက်မိတတ်ခြင်း ချေးငှားထားသောငွေကြေး ပြန်မရနိုင်ခြင်းများ အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေးတွင်လဲ အနှောက်အယှက် အဖျက်အစီးများ ကြုံတွေ့နိုင်သောနှစ်ဖြစ်၍ သတိထားသင့်ပါသည်။
တပေါင်း တန်ခူး ကဆုန်လတွင် ငွေကြေးလာဘ်ရွှင်စေပါမည်။ အလုပ်အကိုင်များ မဆင်ပြေစီးပွားရေးတိုးတတ် အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိနိုင်မည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ လူပျိုအပျိုဖြစ်လျှင် အချစ်ရေးစန်းပွင့်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပြီး အနောက်အရပ်ကချစ်သူတွေ့တတ်ပါမည်။ အချစ်ရေးအဆင်ပြေ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေတဲ့နှစ်ဖြစ်မည်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက အချစ်ကိုမယုံလွယ်ပါနှင့်။ သူတစ်ပါးကြောင့် သားသမီးကြောင့် မျက်နှာပျက် အရှက်ရတတ်ခြင်း စွပ်စွဲပြောဆိုခံရခြင်းများ ခံရတတ်ပါသည်။ ကွဲကွာခဲ့သော အိမ်ထောင်ဘက် ချစ်သူနှင့် ပြန်လည်အဆင်ပြေပေါင်းဖက်ရတတ်ပါသည်။
စီးပွားရေးကျဆင်း အလုပ်အကိုင်များ အဆင်မပြေ ငွေကြေးဆုံးရှုံး နစ်နာတတ်ပါသည်။ ဘာဘဲလုပ်လုပ် အဆင်မပြေနိုင် အဝင်မရှိဘဲ အထွက်သာများနေတတ်ပါမည်။ ဥစ္စာပစ္စည်းများ ကျပျောက်ခြင်း အခိုးခံရခြင်း အပြိင်အဆိုင်အတိုက်အခံများပေါခြင်း ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း လေနာ ရင်နာ ဝမ်းနာ မတော်တဆထိခိုက်နာ မျက်စိရောဂါ လေဖြတ်ခြင်း အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရခြင်းများ ကြုံတွေ့တတ်ပါသည်။ လူမျိုးကွဲများနှင့် ပြသနာခိုက်ရန်ကြုံခြင်း လူမျိုးကွဲကြောင့်ဘဲ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတတ်အဆင်ပြေစေပါမည်။ အိမ်ထောင်ရေး မတည်ငြိမ်နိုင် လင်မယားခြင်း ကွာရှင်းလမ်းခွဲရတတ်ပါသည်။ အထက်လူကြီး ငြိုငင်အထင်လွဲ မိတ်ဆွေကောင်းများ ပျက်စီး မိန်းမကြောင့် ရန်ငြိုးထား အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အနေအထိုင် အသွားအလာဆင်ခြင်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။
အချစ်ရေး စန်းပွင့်သော နှစ်ဖြစ်၍ အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါမည်။ ရှောင်လွဲ၍မရအောင် အိမ်ထောင်ကျကိန်းပါ။ အလုပ်အကိုင်ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရခြင်း အိုးသစ်အိမ်သစ် နေရာသစ်သို့ရွေ့ပြောင်းရခြင်း မင်းစိုးရာဇာများမှ ချီးမြှင့်မြှောက်စားခံရခြင်း ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်လူကြီးဖြစ်ရခြင်း ရပ်ရေးရွာရေး နိုင်ငံရေးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများတွင် ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်ရခြင်း အကြီးအကဲဖြစ်ရတတ်ခြင်း အလုပ်အကိုင်စီးပွားတိုးတတ် ရတနာရွှေငွေလာဘ်လာဘကောင်းများ တိုးပွားစေခြင်း မင်္ဂလာရှိသောအမူကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းများ ဆန်ရေ စပါး ရွှေငွေပြည့်စုံစွာ ရမည့်နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ရဟန်းဖြစ်လျှင်လဲ ကျောင်းဆောင် အလှူရှင်ပေါ်လာပါမည်။
တပို့တွဲ တပေါင်းလများတွင် ငွေကြေးအတွက် စကားများ ရန်ဖြစ်ရခြင်း မိခင် ဖခင်ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ခြင်း ဆွေမျိုးသားချင်းများကြောင့် စိတ်သောက အပူသင့်တတ်ခြင်း တန်ခူး ကဆုန် ပြာသိုလမှာ သားသမီး ဆွေမျိုးလက်အောက်ငယ်သားများကြောင့် အမူအခင်းပြသနာများဖြေရှင်းရတတ်မည်။ အိုး အိမ်နေရာ အလုပ်ရွေ့ပြောင်းရတတ်သည်။ သူခိုးအခိုးခံရခြင်း မီးအန္တရာယ်ပေးခြင်း ချစ်သူတွေ့လျှင်လဲ မလွတ်လပ်သောချစ်သူမျိုးနှင့် ကြုံတွေ့တတ်ပါမည်။ တကယ်လို့ ကြာသပတေးသားသမီးက တနင်္ဂနွေ သက်ရောက်ကျတယ် ဆိုရင်တော့ ယာဉ်ကား စက်ပစ္စည်း ဝင်နိုင်ပါသည်။
မိမိနာမည် မွေးသက္ကရာဇ်အလိုက် အဟောထပ်မံကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
သက်ရောက်တစ်ခုထဲက အဓိကမကျပေမဲ့ ပါပဂြိုလ်စားပြီး၊ ညံ့တဲ့သက်ရောက်ကျနေရင် ဘာဘဲလုပ်လုပ် သတိလေးထားလုပ်ပါ။
ဥပမာ ။ ။ အဂါင်္ဂြိုလ်စား အဂါင်္သက်ရောက်၊ စနေဂြိုလ်စား စနေသက်ရောက်၊ ရာဟုဂြိုလ်စား ရာဟုသက်ရောက်၊ တနင်္ဂနွေဂြိုလ်စား တနင်္ဂနွေသက်ရောက်တွေဟာ ဘုမ္မိကျတဲ့နှစ်တွေဖြစ်လို့ အဲဒီနှစ်တွေမှာ အထူးသတိထားပြီး ငွေချေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ်တိုးချဲ့ခြင်း၊ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းတွေ တတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါ။
ငွေလူလိမ်ခံရခြင်း၊ငွေလျော်ရခြင်းမျိုးတွေ ကြုံတွေ့နိုင်တာကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ ငြိမ်ငြိမ်နေပါ။ မိတ်ရင်းဆွေရင်း ယုံကြည်ရတဲ့သူကို ငွေချေးပေးရင်တောင်မှ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ပြန်ရဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမူပြုပေးပါ။
ဂြိုလ်စားတွက်နည်းကိုတော့ အခွင့်သာလျှင် တင်ပေးပါ့မယ်ရှင်….
ယတြာမေးထားသူများ အတွက် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ သက်ရောက်ယတြာချေနည်းကို ပြန်မျှဝေပါသည်။
တနင်္ဂနွေသက်ရောက် ။ ။ သစ်သီး ( ၆ ) မျိုး၊ ရှောက်သီးသုပ်၊ယပ် ( ၄ ) လက် ၊ သောက်တော်ရေ ( ၆ ) ခွက် မိမိအိမ်ဘုရားမှာ လှူပါ။
မိမိအိမ်တွင်ရှိနေသော မြေအိုးအပဲ့၊ပန်းအိုးအပဲ့ ၊မီးချောင်းအပျက်များ ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။ ဘဲဥ ပြုတ် ခွေးလေးတွေအား ကျွေးပါ။
တနင်္လာသက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် ကံကော် ( ၂ ) ညွန့်၊ နှင်းဆီ ( ၇ ) ပွင့် နှင့် နန်းကြီးသုပ် ၊နံကထိုင် ၊နွားနို့ နှင့် ကိတ်မုန့် လှူပေးပါ။
မိမိအိမ်တွင်ရှိသော လွယ်အိတ်အဟောင်း၊ အရက်ပုလင်းခွံများရှိလျှင် ရှာဖွေစွန့်ပါ။
အာလူးနဲ့ ဝက်သားချက်၍ အရူးကို ထမင်းကြွေးပါ။
အဂါင်္သက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် ရွက်လှ ( ၇ ) ညွန့်၊ ရွှေထီး ( ၄ ) လက်၊ရေတော်သက်စေ့၊ဆွမ်းသက်စေ့၊ဆီမီးသက်စေ့ လှူဒါန်းပူဇော်ရပါမည်။
မိမိအိမ်တွင် နာရီဟောင်း၊စက်ပစ္စည်းဟောင်းတွေရှိနေလျှင် ရှာဖွေစွန့်ပစ်ရပါမည်။
ဗုဒ္ဓဟူးသက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် ပိတောက် ( ၇ ) ညွန့်၊ ဒံပေါက်၊ထောပတ်ထမင်း ၊ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုပ် လှူပေးပါ။
သခွါးသီးမှာ သွားကြားထိုးတံ ၂၆ ချောင်းစိုက်၍ ရေတွင်မျှောပေးပါ။
စနေသက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် အုန်းသီး၊ အုန်း ( ၁ ) ညွန့် သပြေ ( ၆ ) ညွန့်၊အုန်းသီးပါသော မုန့် ( ၆ )ခု လှူပါ။
စနေနေ့ ညနေစောင်းမှာ လုံချည်အဟောင်းတစ်ထည် ရေနံဆီလောင်းပြီး မီးရှို့လိုက်ပါ။
ကြာသပတေး သက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ အုန်းသီးစိတ်၊သြဇာ ( ၃ ) ညွန့်၊ အုန်း ( ၆ ) ညွန့်၊ အုန်းစိမ်း ဆားသိပ် လှူပေးပါ။
ကြာသပတေးနေ့ ညနေမှာ ပဲကြော် ခွေးလေးတွေအားကြွေးပါ။တနင်္လာနေ့ ညနေတွင် ငါးလွှတ်ပေးပါ။
ရာဟု သက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားမှာခရေ ( ၆ ) ညွန့်၊ကော်ရည် ခေါက်ဆွဲ၊ ခေါင်းလောင်း၊ ကြက်လျှာ ( ၆ ) လက် လှူပါ။
သောကြာနေ့ ညနေမှာ ဆိတ်သားဟင်းနဲ့ ထမင်းကြမ်းနယ်ပြီး ခွေးလေးတွေအားကျွေးပါ။ လမ်းဆုံမှာ သဲခင်းပေးပါ။
သောကြာသက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားမှာ ဇီးပြား၊ပေါက်စီ၊ စံပါယ်ပန်း၊ ဆီထမင်း လှူပေးပါ။
စနေနေ့ ညနေမှာ ထန်းလျှက် ( ၁၁ ) ခဲ စက္ကူကန်တော့နှင့် ထုပ်၍ ခွေးလေးတွေကိုပစ် ပေါက်ကြွေးလိုက်ပါ။
တကယ်လို့ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာမဟုတ်ဘဲ တခြားမြို့ရောက်နေလို့ စသည်ဖြင့် ယတြာလုပ်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိခဲ့ရင် မလုပ်ဖြစ်ရင်လဲ စိတ်ခုနေစရာမလိုပါဘူး။ မိမိစိတ်ကိုအမြဲကြည်လင်အောင်ထိန်းပြီး မိမိလက်လမ်းမှီသမျှ မိမိတတ်နိုင်သမျှလေး ကုသိုလ်လေးတွေ လုပ်ပေးရင်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ သွားရင်းလာရင်းနဲ့ လမ်းမပေါ်ရောက်လာတဲ့ အကောင်ငယ်လေးတွေကို သူများတတ်နင်းမိမှာ ဆိုးလို့ လမ်းဘေးပြန်ချပေးခြင်း၊ယာဉ်သွားလမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ ခဲတွေ တွေ့ခဲ့ရင် ဖယ်ပေးခြင်း၊မိမိရပ်ကွက် ဒါမှမဟုတ် မိမိလမ်းထဲမှာ ချိုင့်ခွက်တွေရှိနေရင် တစ်ခုခုနဲ့ ညီညာအောင် လုပ်ပေးခြင်း၊ရေအိုးစင်လှူခြင်း၊ရေတွင်းရေကန် လမ်းတံတား အလှူခံဌာနတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှူဒါန်းခြင်း၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ လမ်းပေါ်က ခွေးလေးတွေကို အစာကျွေးခြင်း၊ ခိုစာကျွေးခြင်း၊ ငှက်ကလေးများလွှတ်ပေးခြင်း၊ ငါးလွှတ်ပေးခြင်း၊ ငါးစာကျွေးခြင်း၊
ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ ဘုရားတို့ ရောက်ရင်လဲ တံမျက်စည်းလှဲ ရေအိမ်သန့်ရှင်းပေးခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ကူညီဖေးမပေးခြင်း၊ မြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်လဲ ကားစီးတာကအစ မိမိထက်ကြီးသူကို နေရာပေးခြင်း၊ပြည့်တဲ့အိုးကို ထပ်မဖြည့်ဘဲ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီး အလှူဒါန ပြုပေးခြင်း စသည် စသည်ဖြင့် ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အစစအရာရာ အတွက် ယတြာလုပ်ပြီးသလိုပါဘဲ ….
အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့၍ ကိုယ်စိတ်နှလုံး အေးငြိမ်းကြပါစေ…
ဒေါ်မြမြနွယ် ( ဗေဒင် လက္ခဏာ )
ထမငျးပေါငျးအိုး မီးနှဈလုံးပွိုငျလငျးနပွေီး ခကျြမရဖွဈနလြှေငျ ဖွရှေငျးနညျး
သငျဟာ”အိုသှေး” ပိုငျရှငျတဈယောကျဆိုရငျ ဒီအခကျြတှကေို မဖွဈမနေ သိထားဖို့ လိုပါတယျ
ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြား၏ စရိုကျနှငျ့ စိတျနစေိတျထား
အမှနျတရားကို မွတျနိုးကွပွီး စိတျထားဖွူစငျတဲ့ သောကွာ သားသမီးမြားအကွောငျး
ဒေါသကွီး သလို အစှဲအလနျးလဲ ကွီးတဲ့ စနေ သားသမီး တို့ အကွောငျး
ဆံပငျကြှတျတာရပျတနျ့စပွေီး ဆံနှယျတှကေို နကျမှောငျသနျစှမျးစမေဲ့ ပဉျြးတျောသိမျရှကျ
အိမျမှာ ကွေးအိုး အလှယျတကူခကျြစားကွမယျ